Kaniisad lagu badalayo xanaano islaami ah | Somaliska
Kaniisad lagu badalayo xanaano islaami ah
Kaniisad lagu magacaabo Hammarkullens kyrka oo ku taala magaalada Göteborg ayaa waxaa la wareegay jaaliyada Islamiska skolan si ay uga dhigaan xanaano caruurta.
Ka dib markii ay sanado badan hoos u dhacayeen dadka isticmaala Kaniisada Hammarkullens kyrka ayay maamulkeeda waxay go’aansadeen in ay iibiyaan kaniisada iyadoo ay tartan u galeen dhowr urur oo doonayay in ay la wareegaan kaniisada. Ururadaas waxaa ka mid ahaa kuwo Kiristaan ah oo ku doodaya in ay iyagu xaq u leeyihiin meesha maadaama ay kaniisad sii ahaanayso.
Balse go’aanka ugu dambeeya ayaa waxaa yeeshay cidii lacagta ugu badan haysata. Kuwaasoo noqday Muslimiinta jaaliyada Islamiska skolan. Muslimiinta ayaa kaniisada u badali doona xanaano caruurta oo ku dhisan diinta Islaamka.
Jaaliyada Islamiska Skolan ayaan ahayn mid ku cusub arimaha waxbarashada iyaga oo sidoo kale masuul ka ah iskuulka lagu magacaabo Römosseskolan kaasoo sanadkii hore ay eedeyn u soo jeedisay hayda baaritaanka iskuulada (Skolinspektionen).
Ma ahan markii ugu horeysay ee Muslimiin ay la wareegeen goobaha cibaadada ee Kiristaanka. Sanadkii hore ayay ahayd markii ay Muslimiinta magaalada Flen ay la wareegeen Kaniisad ka dibna ay ka dhigeen Masjid.
Guryo la’aanta ka jirta dalka oo saameeyn weeyn ku leh qoysaska soomaalida ee soo galootiga ah
Caruurta waalidkooda qasabka looga qaatay oo badatay
Baadari ku taliyay in kaniisadaha la iibiyo ama la burburiyo
malaak sharif says:
April 3, 2012 at 09:38
alxamdulilaah wal shukru lilaah alaahumaa ansural islaam wal muslimiin yaa rab fii kuli makaan
April 3, 2012 at 09:53
Alaha guleyo muslika melkas tujooga
Allahu akbar,nabiga scw aya noshegay inay dintan ay gali meelkasto,
Jaale siyaad! says:
Waa arin keeni karta in GHETO LAGA SAMEEYO magaalada maxaa yeelay, muslimiita waxaa jira kuwa caruurta duufiya oo ka dhigay sida ku wii MINSOTA– ee dhigan jiray school-ka ISLAMIGA kadibna u wada dhuuntey in eey xamar isku qarxiyaan! iyagoon xitaa waarid kii ogeeysiin, marka iska jira meeshaa caruurta geeysaneeysaan.
Hiddo-Raac Abuxudayfah says:
April 3, 2012 at 12:26
Jaale Siyaad – Ninka wata CAQLIGAAGII FASAX ayuu ku Maqanyahay ayaan filaa.
Iskoolada Kirishtaankana waad Gaysanee , Kuwa Muslimiintana waxaa leeda , Maskaxdaa looga dhaqaa – Adigaa ka Caano maalaa meesheey kula danbaysana aan ARAGNO .
Alloow Xanaanooyin islaamiya noo sahal , war kama aanan keeneen e , Soona hanuuni kuwa Maanka Shaydaanku ka Galay
Omar AQBAAR CUSUB says:
Kusocota qofka Soomaaliga ah ee haysta caruur da´doodu kayartahay 18 san
Maxkamada Iswiidhishka ayaa waxa ay qaadatay go´aan cusudub oo ku aadan shuruuda cadaynta, taariiqdu marka ay ahayd janawari 2012. Go´aankaas qaybahaan waxa uu taabanayaa dadka Soomaalida ah oo dalbanaya sharciga daganaanshaha.
Si aad ku heshid sharciga daganaanshaha Iswiidhan waa in qofka dalbanaya sharciga uu cadeyaa jinsiyadiisa kuna cadeyaa baasaboor shaqeynaya ama dukuminti kale. Laakiin Iswiidhan ma´aqbalayso baasaboorka Soomaaliga ah ee soobaxay wixii kadambeeyay bisha janawari 1991.
Laakiin go´aan kaan cusub ayaa waxa uu ogolaanayaa in caruurta aan haysan baasaboor ay ku cadayaan jinsiyadooda in ay helikaraan sharciga daganaanshaha si ay ugu yimaadaan waalidkooda dagan Iswiidhan. Taasina waxa ay dhacaysaa markii laga qaado DNA si loo lacadeeyo in caruurta iyo waalidku ay is dhaleen. Sidookale aritaani waxa ay qusaysaa qofka waalidka ah ee doonaya in uu u yimaado caruutiisa dagan wadanka Iswiidhan, ama qofka waalidka ah ee lasocda ilmaha qofka waalidka ah ee Iswiidhan jooga uu dalbaday.
Bogogaan internetka ah ayaad kahelikartaa:
April 3, 2012 at 17:32
Dalab u qorista hey´adda Iswiidhishka u qaabilsan arimaha dibada
Halkan ayaad ka heli kartaa warbixin ku saabsan sidii aad u dalban lahayd sharciga daganaansha, hadii aadan fursad u lahayn inaad dalabka kasamaysid shabaakada internetka.
Shaqsi ahaan ayaad dalabka gaynkartaa meesha kuugu dhaw ee ay kutaalo hey´adda Iswiidhishka u qaabilsan arimaha dibada (safaarad ama qunsuliyada). Waa in aad adugu shaqsiyan la xiriirtaa hey´adda qaabilsan arimaha dibada si aad wax uga ogaatid nidaamka ay u shaqeeyaan, si aad ugu gaysid codsigaaga ugana samaysatid waqti lagaa qaado waraysi ama interfiyuu. Marka lagaa qaadayo waraysiga waxaa kamid ah su´aalaha lagu waydiinayo xiriirka kaala dhexeeya qofka reerkaaga katirsan ee dagan Iswiidhan.
Sidaan ayaad dalabka u samaynaysaa
Waxaad isticmaaleysaa warqadda lagu dalbado sharciga daganaanshaha Iswiidhan ee lambarkeedu yahay 160011. Dalabka caruuta kayar 18 sano waxaa lagu qorayaa warqadda dalabka sharciga daganaanshaha ee caruurta da´doodu kayartahay 18 sano ee lambarkeedu yahay 162011. Warqadda kale ee lagu qoraya warbixinta familiga oo dhan lambarkeeduna yahay 238011, waxaa lagu buuxinayaa ama lagu qorayaa warbixinta qofkasta oo familiga katirsan ee dalabka sharciga daganaanshaha kujira.
Waxaad saxiixi doontaa dukuminti u ogolaanaya hey´adda qaabilsan arimaha dibada in ay kaa qaado tijaabada-DNA: ga. Qofka kuu dacwoonaya ee jooga Iswiidhan waxa uu sidookale saxiixi doona dukumintigaas mid lamid ah oo uu ugu ogalaanay hey´dda socdaalka ee Iswiidhan in ay qaado tijaabada-DNA:ga. Taas waxa uu qofka kuu dacwoonaya ka samayndoonaa mid kamid ah xaafiisyada hey´adda socdaalka.
Codsiga baasaboorka la siiyo qaxootiga(Främlingspass)
Markii aad dalbanaysid sharciga daganaanshaha waxaad u baahantahay in aad dalbatid baasaboorka lasiiyo qaxootiga hadii aadan haysan baasaboor. Waxaad codsiga dalabka baasaboorka qaxootiga ku qoraysaa warqadda dalabka baasaboorka qaxootiga iyo wliba baasaboorka kumeelgaarka ah warqada codsiga ee lambarkeedu yahay 156011. Taasna waxaad samayn kartaa marka aad dalabka sharciga daganaansha samayneysid ama marka aad interfiyuuga ama waraysiga lagula yeelanayo. Laxiriir hey´adda qaabilsan arimaha dibada si aad u heshid warbixin dheeraad ah oo ku saabsan sidiid aad u dalbanlahayd baasaboorka la siiyo qaxootiga.
Qarshka kubaxaya dalabka
Dadka intiisa badan waa in ay bixiyaan qarsh loogutalagalay dalabka, markii ay dalabka samaynayaan oo ay gaynayaan safaarada ama qunsuliyada.
Hadii laguu ogolaado sharciga daganaanshaha waxaad helidoontaa kaar sharciga daganaansha ah. Kaarkaas waxa uu cadaynayaa in aad leedahay sharciga daganaanshaha.
Si´ay hey´adda socdaalku u samayso kaarka sharciga daganaanshaha waxaa lagaa qaadi doonaa masawiro iyo faro, waxaana kaa qaadi doona hey´adda qaabilsan arimaha dibada, (caruuta da´doodu kayartahay 6 sano uma baahna in laga qaado faro).
Taasi waxa ay dhicidoontaa marka aad codsiga gaynaysid safaarada ama lagaa qaadayo interfiyuuga/waraysiga ama marka aad hesho sharciga daganaanshaha. Markii go´aanka lagaaro waxaa loo soo gudbinayaa hey´adda qaabilsan arimaha dibada. Ogaaw taasi waxa ay qaadan kartaa ilaa afar asbuuc in lasameeyo kaarka dharcga daganaanshaha loona soo gudbiyo he´yadda qaabilsan arimaha dibada. Si aad Iswiidhan ku timaadid waa in aad wadataa kaarka sharciga daganaanshaha iyo baasaboor la ogolyahay.
This page in English » This page in Svenska »
Sidan senast uppdaterad: 2012-04-02
April 3, 2012 at 20:37
Kheyr batay waye walalaha isku xilqamay arinkan allaha ka abal mariyo dadalkan labada dhinac ah ee ay sameyen marna ah in meel dinta logu adego ay juhdi ku bixiyen marna meel ilahey lagu shirkiyo ay suliyen aan ku dayano walalaha walalayal
ASC ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR ALLAAH AYAA MAHADLEH ISLAAMKA ALLAAH HAGUULEEYO MEELKASTA OO AY JOOGAAN aamiiin aaamiiin aamiin wabillaahi towfiiq
April 4, 2012 at 05:18
Allaahummansur man nasaraddiin wakhdul man khadalal muslimiin
April 4, 2012 at 11:10
Kaniisada oo qarash badan ow ku baxey!?
lacagta boqortoyaa sacuudiga, oo noga daba timid, Sweden, in saas carabtu noo jeceshay ma ba ogeeyn, Cabdi Risaaq waa beri iyo al masry, wax dhibaat ah kama sheegin, gadashada kaniisada, waxeey yiraadeen waxeey la mid tahay, Guri kasto oon iibsan laheeyn, marka waxeey ku ad keeyeen YALOOQAN, IN AAN SIQAAS AH U RAAD SANEY KANIISADA.
April 4, 2012 at 13:15
allahu akbar walilahi xamdu
April 7, 2012 at 08:45
aad ayaan usoo dhoweynayaa arintaas waxay kamid tahay ismalka oo talabo hore u qadey kana baxeysa ashuun ku adaan wadamada yurub
April 14, 2012 at 13:09
sxbayal iskuulkaan ama xananada islaamiga ah ee laga furay xaafada Hammarkullen magaalada GÖteborg waxaana ka danbeeya aas aaskiisa raabidada islaamka ee sweden soomaaliduna qaybka thaya waana meesha kaliya ee wajahda dhibaatada soomaalida iyo muslimiintaba waana kuwa soomaaliya oo xabadu dhacayso xamar qalinka haya